Badeecaddu waa budad-cawlan budo aan caadi ahayn oo leh awood nuugid ballaadhan waana olol hoosta heerkulka sare ama xaaladaha dhimbiillada korantada
Vanadium waa bir bir-cawlan. Barta dhalaaliddu waa 1890 + 10Cabbi oo ah mid ka mid ah biraha dhifka ah ee leh barta dhalaalka badan. Waxay leedahay dhibic karkaraya oo ah 3380C, vanadium saafiga ah waa mid adag, oo aan magnetic iyo malleableable, laakiin qadar yar oo wasakh ah, gaar ahaan nitrogen, oxygen iyo hydrogen, si weyn u yareyn kartaa balaastikkiisa.
waxaa badanaa loo isticmaalaa sida raajada cathode iyo tungsten wire Manufacturng Industry Pure hafnium oo leh baaxad, habsami u socodsiinta, heerkulka sare ee iska caabinta daxalka, Waa shey muhiim u ah warshadaha tamarta atomiga Hafnium qaybta kuleylka qabashada kuleylka kuleylka, waa nuuriyaha nudaha ugu fiican, waa la isticmaali karaa sida ulaha xakamaynta atomiga iyo qalabka ilaalinta
Nidaamka wax soo saarka: Zirconium wuxuu nuugaa hydrogen at 400-800 ℃ wuxuuna soo saaraa zirconium hydride iyada oo loo marayo taxane ah marxaladaha kala-guurka. Hydride Zirconium waxaa lagu jajabiyaa heerkulka sare. Guud ahaan, haydarojiin waxaa lagu qallajin karaa 500 ℃ iyadoo la hoos marinayo faaruqinta 0.133 Pa, hydrogen-na waxaa gebi ahaanba laga saari karaa 800-1000 ℃.
Vanadium: astaanta astaamaha V, birta cawlka qalinka ah, miiska xilliyeedka waxaa iska leh kooxda VB, nambarka atomikada 23, miisaanka atomiga 50.9414, BCC crystal, valence caadi ah waa + 5, + 4, + 3, + 2. Vanadium wuxuu leeyahay dhalaal sarreeya dhibic waxaana badanaa loogu yeeraa bir diif ah oo ay weheliso niobium, tantalum, tungsten iyo molybdenum. Waa mid malleable, adag oo aan magnetic.